ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်များမှာ ကြမ်းပြင်သန့်ရှင်းရေးသုံးစုတ်တံများ၊ Digital Room Thermostat၊ wafer အတွက်သတ္တုလက်စွပ်၊ PP နှင့် နိုင်လွန်နှင့် ဝါယာကြိုးများ၊ ပလပ်စတစ်ပြားစသည်ဖြင့် စုတ်တံအစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်ပါသည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် နောက်ဆုံးရောင်းချနေသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်အခန်း အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ ကိုးကားချက်
Low Voltage DC Miniature Circuit Breaker ၏ ရှင်းလင်းချက်
Digital Room Thermostat သည် အဆင့်မြင့်ဆုံးနှင့် နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းမီ မိုက်ခရိုကွန်ပြူတာ ထိန်းချုပ်မှု ချစ်ပ်ကို အသုံးပြု၍ တည်ဆောက်ထားသော NTC တိကျသော အာရုံခံကိရိယာဖြင့် အတွင်းခန်းအပူချိန်ကို တိုင်းတာသည်။ ၎င်းသည် ဆက်တင်အပူချိန်နှင့် အမြဲနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပြီး အပူ/အအေး လေဝင်ပေါက်ကို အလိုအလျောက် ထိန်းညှိပေးသည် သို့မဟုတ် မော်တာတပ်ထားသော အဆို့ရှင်ကို အဖွင့်/အပိတ်၊ အခန်းအချို့ အပူချိန်တွင် ထားရှိရန်။
Digital Room Thermostat အတွက် သတ်မှတ်ချက်-
အလုပ်လုပ်သောဗို့အား : AC220V ±10% , 50 / 60Hz
အများဆုံး ခံနိုင်ရည်အား : < 3A
ဓာတ်အား ကိုယ်တိုင် သုံးစွဲမှု : < 1 . 5W
အပူချိန်တိကျမှု : ±1â„ƒ
အချိန်ကိုက်မှု အမှား- < 1%
အထွက်အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ : < 200W
အပူချိန် သတ်မှတ်မှု အကွာအဝေး : 5â„ƒ-35â”ƒ
ဒစ်ဂျစ်တယ်အခန်း အပူချိန်ထိန်းကိရိယာအတွက် စံသတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းမှု-
A. ပန်ကာကွိုင်ယူနစ်နှင့် မော်တာအဆို့ရှင်ထိန်းချုပ်မှု- အအေးပေးခြင်း၊ အပူပေးခြင်း နှင့် လေကောင်းလေသန့် လုပ်ဆောင်ချက်၊
B. ပန်ကာကွိုင်ယူနစ် လေတိုက်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း--။ အမြင့်၊ အလတ်စား၊ အနိမ့်၊ အလိုအလျောက်၊
C. ပြသထားသော ဇာတ်ကောင်အရောင်- အစိမ်းရောင်၊
D. ငွေရောင် သို့မဟုတ် အဖြူရောင် အရောင်များအတွက် အခွံအပိုင်းအစများ။
hot Tags:: ဒစ်ဂျစ်တယ်အခန်း အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ၊ တရုတ်၊ စျေးပေါ၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးရောင်းချမှု၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စတော့တွင် အခမဲ့ နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်